IT Engineer Course | Lan Thit Innovation Co., Ltd ﻿
25.2.2020, Full time , Recruitment / Employment Agency
Training Program - ဂျပန်ဘာသာ၊ Programming skill ((ဂျပန်စကားအခြေခံ လုံးဝမရှိသူများအတွက် Basic level ၊ Intermediate N4 Level နှင့် Advanced N3, N2 Level)
အလုပ်လုပ်ရမည့် နေရာ - Japan
ညနေ ၆နာရီ နောက်ပိုင်းတွင် ဂျပန်စာ သင်ရမည်။
Project ကာလ - ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာမှစ၍ ၅လမှ ၁၁လအထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
“WORK IN JAPAN”(IT Engineer course) / Japan နိုင်ငံ၌ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရမည်။ (IT Engineer Course)
>Screening Process <
1.	Programming စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည်။
2.	Interview ဝင်ရမည်။
3.	Training ကာလ ၃ လကြာမြင့်ပါမည်။
4.	Training ကာလ ပြီးပါက Final interview ဝင်ရမည်။
5.	Final Interview အောင်မြင်ပါက scholar ရရှိပြီး ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရန် ရွေးချယ်ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။
နေ့ရက်နှင့် အချိန် - တနင်္လာမှ ကြာသပတေးနေ့အထိ (ညနေ ၆ခွဲမှ ၈ခွဲထိ)
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ (နေ့လည် ၁နာရီမှ ညနေ ၅နာရီအထိ)
•	အသက် ၂၂နှစ်မှ ၃၀နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
•	Bachelor Degree ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
•	Programmer အဖြစ် အလုပ်အတွေ့အကြုံ ၃နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။
•	DB knowledge ရှိရမည်။
•	ဂျပန်စကားပြောတတ်သူများအား ဦးစားပေးမည်။ (လုံးဝမပြောတတ်သူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။)
We offer *** Training fee - အခမဲ့ ***
Scholarship - လစဉ် US Dollar 100 (၅လမှာ ၁၁လအထိ)
Japan ၌ရမည့် လစာ - USD 1800 နှင့် USD 2500 ကြား
IT & Telecoms jobs IT & Telecoms jobs Recruitment Agency Jobs in Myanmar, jobs in Yangon